ओली संरक्षक र सर्वोच्च नेता रहने एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्दै, प्रचण्ड-नेपालसहित ५ जनाको अध्यक्ष मण्डल !
काठमाडौं, ४ जेठ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता टुटेको ५० दिनभित्रै पुःन एकता प्रयास शुरु भएको छ । एमालेकै बीचमा एकता हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा माओवादीसँगको एकता कसरी सम्भव हुँदैछ त ?
सुन्दा अचम्म लागेपनि राजनीति सम्भावनाको खेल पनि हो भन्ने तथ्यको नेपालमा पटकपटक व्यवहारिक रुपान्तरण भइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माले सोमबार पुनः कम्युनिष्ट एकताको बारेमा दिएको अभिव्यक्ति यही गृहसँग जोडिएको स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले र माओवादीका केही नेताहरु अहिले पनि यसैको गृहकार्यमा जुटिरहेको तथ्य खुलेको छ । पार्टीको नामसहित एकता प्रक्रियाको नयाँ सुत्रमा छलफल भएको एमालेका एक नेताले खुलासा गरेका छन् । यद्यपि बिषय गम्भीर रहेको भन्दै यस बिषयमा पात्र र वार्ता स्थल तथा छलफलमा सहभागीको संख्या गोप्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको बेला आएको यो खबरले कार्यकर्ता भने आश्चर्यमा परेका छन् । एकातिर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहसँग भावनात्मक एकता हुन नसकिरहेको बेला माओवादीसँग समेत एकताको चर्चा चलेपछि एमालेमा केही नेता शसंकीत छन् ।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका केहि विश्वासपात्रहरु यो अभियानमा लागेको र केहि समयमै रिजल्ट देखिने छ । एकता भएमा पार्टीको नाम एकीकृत कम्युनिष्ट केन्द्र वा समाजवादी केन्द्र नेपाल राख्ने बिषय समेत उठेको छ ।
यो अभियानमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षको समाजवादी धारलाई समेत जोड्ने तयारी रहेको ती नेताले जानकारी दिए । तर, यस बिषयमा जसपासँग कुराकानी भइसकेको भने छैन । जसपाका एक नेताले यसबारे आफूले कुनै संकेत नै नपाएको बताए ।
कम्युनिष्ट केन्द्रको संरक्षक र सर्बोच्च नेता केपी ओली हुने र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाउने तयारी वार्तामा जुटिरहेका नेताहरुको छ । दुवै तर्फका दोस्रो र तेस्रो तहका नेतालाई समेटेर कार्यकारिणी समिती र सचिवालय बनाउने तयारी उनीहरुको छ ।